Qolooyinka baara dadka raaca Diyaaradaha Mareeykanka oo la sheegay inay si toos ah u Qafiifeen (Daawo nin Xubintiisa Taranka Qarax lagu tilmaamay) - iftineducation.com
aadan21 / August 5, 2012
iftineducation.com – Nin lagu magacaabo Jonah Adam Falcon ayaa waxa uu dhulka ku jiiday hab dhaqanka Shaqaalaha baara dadka raaca Diyaaradaha dalka Mareeykanka kuwaas oo magacooda marka la soo gaabiyo loo yaqaan (TSA). Jonah Adam Falcon oo 41 jir ah waxaa mudo dhoor Saacadood ah lagu xiray garoonka Diyaaradaha San Francisco International Airport ee dalka Mareeykanka.
Jonah Adam Falcon oo doonayay inuu u duulo magaalada New York ee isla dalka Mareeykanka ayaa waxaa celiyay oo Xabsiga u taxaabay Shaqaalaha baara dadka raaca Diyaaradaha Mareeykanka ee TSA waxeeyna ku eedeeyeen ninkaan inuu Qarax ku wato hoos maadaama uu Surweelkiisa soo buurnaa.
Ciidamadii hareereeyay ee xiray Jonah Adam Falcon ayaa ugu dambeeyntii dharka ka dhigay waxeeyna ogaadeen waxa Surweelkiisa ka soo buuran inay tahay Xubinta tarankiisa taas oo ka yaabsatay guud ahaan Shacabka dalka Mareeykanka maadaama dhacdada nuucaan ah aysan wali horay uga dhicin Dunida oo idil.
Shaqaalaha baara dadka raaca Diyaaradaha dalka Mareeykanka ee TSA ayaa waxaa la xaqiijiyay intooda badan inay isku dhex yaaceen ,maxaa yeelay inta ay ka cararayaan Qaraxyo loo geeysto Diyaaradaha dalka Mareeykanka ayay hadane waxeey faraha la galeen meelo halis ah sida xubinta Taranka Iwm.